Qoysas ka soo barakacay Bakool oo lug ku tegay Luuq
(ERGO) - Qoysas badan oo ka soo barakacay degmooyinka iyo deegaannada go’doonsan ee gobolka Bakool ayaa saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay ku biiray dadka ku jira shan xero oo lagu barakacay oo ku yaalla degmada Luuq ee gobolka Gedo. Qoysaska intooda badan waxay ahaayeen beeraley iyo xoolo-dhaqato ay soo barakicisay abaar iyo biyo la’aan ka jirta Bakool.
Dadka tagay Luuq oo ay tiradooda gaarayso 175 qoys ayaa u badan haween, carruur iyo dad da’ ah. Waxay intooda badan ka soo barakaceen degmooyinka Waajid, Xudur iyo tuulada Ceelboon ee gobolka Bakool. Luuq ayaa ah halka ugu dhow ee ay ka heli kareen xeryo loogu talagalay dadka soo barakacay.
Faaduma Xaaji Cabdullaahi iyo 10 carruur ah oo ay dhashay waxay ka mid yihiin 90 qoys oo ka soo barakacay degmada Waajid, oo hadda ku biiray dad horay u barakacay oo ku nool xeryaha Luuq. Waxay Raadiyo Ergo u sheegtay inay shan maalin u soo lugeynayeen Luuq oo ay yimaadeen toddobaadkii hore. “Intii aan waddada ku soo jirnay carruurta tabarta ayaa ka dhammaatay, gaajo iyo harraad ayay u dhiman gaareen,” ayay tiri. Si la mid ah Faaduma qoysaska kale ee gaaray Luuq way soo lugeeyeen, sababtoo ah waddooyinka muhiimka ah ee Bakool ku xira gobollada kale waxay ku go’een dagaallo dhex maray ciidanka dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Dadku ma awoodaan lacagta lagu raaco gaadiidka faro-ku-tiriska ah oo la heli karo oo mara waddooyin qardajeex ah. Sidaas daraadeed habka keliya ee u furan waa inay lugeeyaan ama qoyskii heli kara uu isticmaalo gaari-dameer.
Faaduma waxay ka mid ahayd qoysas beeraley ah oo ay saameysay biyo-yari ka jirta gobolka.
Aadan Deeq oo xubin ka ah guddi ay leeyihiin shanta xero ee lagu barakacay ee degmada Luuq ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in 50 qoys oo dadkaas ka tirsan ay ka yimaadeen Xudur, halka tuulada Ceelboon ay ka soo barakaceen ilaa 35 qoys. “Waxay hadda dulsaar ku yihiin qoysaskii horay u degganaa xeryaha,” ayuu yiri. Wuxuu tilmaamay in aan gargaar cunto oo joogto ah laga bixin xeryaha.
Xoolo-dhaqatada ayaa u barakacaya daaq-yari ka jirta deegaannada qaar. “Waxaan soo lugeynaynay 8 maalin,” ayuu yiri Isxaaq Ibraahim Axmed oo sheegay in ay abaar uga dhammaadeen xoolihii ay dhaqanayeen. Wuxuu ka mid yahay dadka ka soo barakacay miyiga Xudur ee gaaray Luuq. “Halkan waxaan u nimid si aan hay’adaha samafalka gargaar bani’aadannimo uga helno, ilaa haddana wax gargaar ah oo na soo gaaray ma jiro,” ayuu yiri. Wuxuu xusay inay cunto la’aan iyo hooy la’aan ku haysato xeryaha.
In ka badan saddex kun oo qoys oo horay ugu barakacay colaado iyo abaaro, kana kala yimid deegaannada gobollada Gedo, Baay iyo Bakool ayaa afartii sano ee la soo dhaafay ku noolaa shanta xero ee ku yaalla duleedka Luuq.
(Axmed Cumar Saalixi/AT)